Bollywood News – Page 2 – Filimside.net
Wajiga waa meesha qofka in badan ka fikiro waana xubinta ugu muhiimsan jirka xaga quruxda marka la joogo sidaa awged ayuuna qof marwalba muraayad u isticmaala uguna fikiraa inuu wajigiisa qurux badnaado. Hadaba waxaa jiraa […]
Kajol ayaa dhammeysatay 25 sanno oo ay ku jirtay fanka India, waana mid ka mid ah atariishooyinka sida weyn loo qiimeeyo ee Bollywood Town. Kajol ayaa sannadkii 1992dii waxay Bollywood-ka kusoo gashay filimkii Bekhudi, inkastoo […]
Xiddigaha magaca sarre ku sameystay Bollywood ayaa isugu yimid xafladdii heerka sarre aheyd ee Filmfare Glamour & Style Awards 2017, halkaas waxaa ku kulmay wajiyo caan ah. Xitaa shimbirihii hore ee jaceylka Kareena Kapoor iyo […]
Ka dib markii filimsameeye R. Balki uu xaqiijiyey waqtiga la daawan doono filimkiisa Padman, wararka la isla dhexmarayo ee ku saabsan inuu Box Office-ka India heli doono tartan u dhexeeya Akshay Kumar vs Akshay Kumar […]
Filimsameeye Karan Johar ayaa wuxuu daaha ka qaaday inuu labada Isbuuc ee soo aadan ku dhawaaqi doono filim ay hogaamiye ka tahay atariishada caanka ah Sonakshi Sinha. Karan Johar iyo Sonakshi Sinha ayaana markale isla […]
Akshay Kumar iyo Salman Khan marka magacyadooda si wadajir ah loo soo hadal qaado taageere walba oo Bollywood ah waxaa maankiisa kusoo dhici jirtay inay saaxiibo wanaagsan yihiin. Balse haatan warbaahinta India ayaa sheegeysa inuu […]
Hadalheynta xiriirka jaceyl ee ka dhexeeya Virat Kohli oo ah ciyaaryahan ciyaara Cricket iyo atariishada Bollywood Anushka Sharma ayaa muddo dheer socotay. Xaqiiqaduse waxay tahay in Virat Kohli iyo Anushka Sharma aysan la gamban dareenkooda […]